Maxaa lagu xushay ninka Soomaaliga ah ee uu Joe Biden ka dhigay la taliyaha? | Radio Hormuud
Maxaa lagu xushay ninka Soomaaliga ah ee uu Joe Biden ka dhigay la taliyaha?
Xamse Warfaa ayaa qaxootinnimo ku tagay dalka Mareykanka isagoo da' yar sannadihii 1990-meeyadii. Waxa uu horay u ahaa ku xigeenka madaxa waaxda shaqada iyo horumarinta dhaqaalaha ee gobolka Minnesota.
Maxaa lagu xushay Xamse Warfaa?
Wareysi uu BBC-da siiyay ayuu Xamse Warfaa ku sheegay in uu horay ulasoo shaqeeyay Joe Biden, howlo baaxad lehna uu usoo qabtay.
"Ma aha markii ugu horreysay ee uu xiriir na dhex maro maamulka madaxweyne Biden, xilligii uu ku jiray tartanka siyaasadda, laga billaabo bishii saddexaad ee sanadkii 2020-kii, waxaan ahaa la taliyaha dhaqaalaha ee ololihii madaxweyne Biden, marka xiriir hore oo toos ah ayaan la lahaa.
"Mas'uuliyadda aan gobolkan ka hayo ayaa fursad ii siisay in aan waxyaabaha ku saabsan dhaqaalaha iyo caqabadaha la xiriira ka shaqeeyo. Fikradihii badnaa ee ay dowladdu hirgelisay waa kuwii aannu aasaasnay intii uu ololuhu socday," ayuu yiri.
"Sidaan ognahay xilligan aan ku jirno waa mid xasaasi ah, isbadallo waaweyn ayaa ka dhacay gudaha Mareykanka, geeska Afrika iyo caalamka intiisa kaleba. Tani waa fursad qaali ah oo aanu ku hormarineyno dimuqraaddiyadda, islamarkaana ku xoojineyno xuquuqul insaanka.
"Bishii 12-aad ee sanadkii lasoo dhaafay madaxweyne Biden wuxuu qabtay shir weyn oo la yiraahdo shirka arrimaha dimuqraaddiga, wuxuu halkaas kaga dhawaaqay in sanadkan aynu hadda galnay ee 2022-ka uu noqon doono sanadkii ficillo dhab ah la sameyn lahaa si loogu xoojiyo dimuqraaddiyadda looguna xoojiyo xuquuqda aadanaha.
"Marka waan ku faraxsanahay inaan qayb ka noqon doono hirgelinta qodobbo waaweyn oo kasoo baxay shirkaas, oo qaar badan la hirgelin doono sanadkan," ayuu yiri isagoo la hadlayay BBC-da.
"Waa farxad gaar ii ah iyo mid guud oo ay ila wadaagaan dadka Mareykanka ah iyo dadka kasoo jeeda luuqaddan aan ku hadlayo. Waxaan si gaar ah uga mahad celinayaa bulshada Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan farriimihii ay ii soo direen," ayuu yiri Xamse Warfaa.
Waa aqoonyahan heysta shahaadada mastare-ka ee cilmiga maamulka hay'adaha iyo hoggaaminta oo uu ka bartay jaamacadda Springfield College ee gobolka Massachusetts. Sidoo kale waxa uu shahaadada heerka koowaad ka heystaa seyniska siyaasadda, oo uu ka bartay jaamacadda San Diego.